IMangosuthu izoqinisa ezokuphepha ezindaweni ezihlala abafundi kulandela ukubulawa kukaZolile | News24
IMangosuthu izoqinisa ezokuphepha ezindaweni ezihlala abafundi kulandela ukubulawa kukaZolile
Kuzofakwa ama-metal detectors kuzona zonke izindawo ezingaphandle okuhlala kuzo abafundi baseMangosuthu University of Technology (MUT) kulandela isigameko sakamuva sokubulawa kwesitshudeni eLonsdale, eThekwini.
Iziphathimandla zasenyuvesi zibize isithangami sabezindaba ngoLwesibili eMlazi, eningizimu yeTheku, zaveza ukuthi sezibhalele abanikazi bezindawo okuhlala kuzo abafundi ukuba kufawe le mishini ngokushesha.
Isitshudeni ebesenza unyaka wokuqala ezifundweni zeQuantity Surveying, uZolile Khumalo, 21, wadutshulwa wabulawa ezintatha ngoLwesibili olwedlule, endaweni ayehlala kuyo eseThekwini.
OLUNYE UDABA: Uhleli lubhojozi umndeni otakule uThabani Mzolo osizini
Kusolakala ukuthi wadutshulwa nguThabani Mzolo, 23, okukholakala ukuthi ubeyisoka likaKhumalo.
Amaphoyisa athola umufi enamanxeba okudutshulwa endaweni yesigameko, eseshonile.
UMzolo owake wafuna e-MUT, wabe esebhala kuFacebook ngemuva kwesigameko imibhalo yakhe izwakalisa sengathi uvuma icala.
Kuthiwa wangeniswa eLonsdale omunye umfundi, ngokusho kwesikhungo. Amaphoyisa aqhuba ngokuthi uMzolo wazinikela kuwo ngemuva kwesehlakalo.
Kwatholakala isibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni endaweni yesigameko.
"Umsolwa, uThabani Mzolo, obefunda lapha e-MUT kanti waphuma ngo-2017," kusho isekela likashansela ophinde abe nguthishanhloko, uDkt Enock Duma Malaza.